တောင်များကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
Welcome back Cho Thin :)
စိတ်ဝင်စားစွာ ဖတ်သွားပါတယ် အမရေ
တခါတရံ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ တော်တော် ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်
DJ မိုးချို.. ကွ
စာပြန်ေ၇းဖို့ ကြိုးစား တာ ကောင်းလိုက်တာ ညီမရေ
မမ တို့ တကယ်လွမ်းနေတာပါ..
Thanks for posting for us again.
အပေါ်တပိုင်းလေးပဲ ဖတ်ရသေးတယ်။ ၀မ်းသာလို့ comment ကောက်ရေးလိုက်တာ။ ဆက်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်။
ယောက်ကျားဆန်သလိုလိုနဲ့.. အရီသန်တဲ့..မကြီးတင်ရယ်.. မိန်းမသိပ်ဆန်ပြီး.. ငိုသံလေး နဲ့ စကားပြောတဲ့..မနိုင်ရယ်.. တီချယ်ဌေး ရယ်..(၀တ္တုထဲက.. --- ကလေး ဆိုတဲ့.. စာရေးသူ ကိုတော့.. အပြင်မှာ..ကွင်းထဲမှာ..မတွေ့ခဲ့..မခင်ခဲ့ရတာ..နာပါ့..) အားလုံးကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်ယောင်သွားတယ်..။ေ၇ွှဥမင်ဘုရားကြီးရယ်.. ရှမ်းတောင်ကုန်း မို့မို့လေးတွေရယ်.. မြို့က ကျောင်းသူ-သားတွေကို ခင်မင်ဖော်ရွေတဲ့.. ရွာခံ တွေရယ်..
ဘာပဲပြောပြော..ကျမတို့..တောင်တွေ အတော်များများ တက်ခဲ့ပြီးပါပြီ..မချိုသင်းရေ... အားမလျော့နဲ့..အားမငယ်နဲ့..အားလဲ..မတတ်နဲ့.. အားလဲ မကျနဲ့..
တက်စရာ ရှိတာ တက်၍..ဆင်းစရာ ရှိတာဆင်း ခဲ့ကြတဲ့.. ကွင်းဆင်းရက်များ အတိုင်း.. လမ်းဆက်လျှောက်မယ်လေ..း))
၀တ္ထုဖတ်ပြီး ငွေတာရီ ကဗျာလေးတောင် သတိရသွားတယ် မမ။ "ထိပ်ဆုံးသို့" လေ။
သြော်..နေအုံး..ကျန်ခဲ့သေးတယ်။ ၀တ္တု အပြင်က.. အသံ အကြီးကြီးနဲ့..အမြဲ ရီမောနေတတ်တဲ့..ကိုနေလင်းရယ်.. ဆံပင်အရှည်ကြီးကို စည်းပြီး..ဇော်မင်းယုလို ကင်မရာကြီး တကားကားနဲ့..ဘာမှ မမြင်ပဲ..ကောင်မလေးတွေကို ဓါတ်ပုံ လိုက်ရိုက်ပေးတဲ့..ကို ထူးမှုံ ရယ်..ကိုလည်း..သတိရကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါ။း))
အမက လူကဲခတ်ကောင်းလိုက်တာ .. :P
သီချင်းတွေထထပိတ်မယ်လုပ်တာ ဖတ်နေရင်း ရယ်ရသေးတယ်။
ငယ်ဘ၀ ၀တ္ထုလေးလဲ ဖတ်လို့ကောင်းတယ် အမ။
ဘ၀တွေကတော့ တောင်တွေကို ကျော်ဖြတ်လိုက် ပင်လယ်ထဲ လက်ပစ်ကူးလိုက်နဲ့ပါပဲ ... ။
ဟုတ်တာကိုခေါင်းခါတာ အိန္ဒိယတွေလေ အစ်မ.. ကုလားမတွေကို တစ်ခုခုမေးရင် ပါးစပ်က Yes ဆိုပြီး ခေါင်းချည်း ခါပြတော့ နားမလည်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ ။
ငယ်ငယ်ကရေးတဲ့ ဝတ္ထုလေးဖတ်ရတာလည်း ကျေးဇူး..။
ခပ်သော့သော့၊ပါးပါးလေးရေးချက်တွေက အနားမှာ ထိုင်ကြည့်နေရသလိုဘဲ..။
“ ဒီတောင်ကိုတော့ ကျော်နိုင်ပြီ” လို့ မမိုး မေမေက အမြဲပြောတယ်..။
မမိုးက နေမကောင်းတဲ့အခါ “ဒီတောင်ကိုတော့ မကျော်နိုင်ဘူးလို့ ”ငြီးတတ်တာလေး ဖတ်ဘူးသလိုဘဲ..။
နေရောကောင်းရဲ့ လား..ဟိုတလောက စာအသစ်မတွေ့ ရတော့ နေမှကောင်းရဲ့ လားလို့ ...။
စာရေးတဲ့သူကမရေးဘဲကိုမနေနိုင်တာပါ .။ အကြောင်းဆုံတိုင်းရေးဖြစ်မှာပဲ..၊ ကျနော်လဲလာဖတ်သွားတယ်အမရေ. ရေးစရာမရှိ်ရင်တောင် ငယ်ငယ်ကရေးခဲ့တာလေးတွေပြန်ရှာတတ်တာလဲ သဘာဝပဲ ကျနော်ရောပဲအမရေ..ဖတ်ပီးသွားတော့ ဘာကိုမှန်းမသိလွမ်းတယ်......
ဒီတောင်တွေကို ကျော်နိုင်လိုက်ပြီ ဆိုတဲ့ ပီတိ မျိုးတောင်တွေကို ကျော်ပြီးတိုင်းရတယ်...။ အရမ်းပျော်ပါတယ်...။ တောင်တွေကို ကျော်ဖြတ်နေစဉ် ဖေးမ ကူခဲ့တဲ့ အဖေ၊ အမေ ညီကိုမောင်နှမ ဆရာသမား သူငယ်ချင်း အားလုံးကို ဒီစာဖတ်ပြီး လွမ်းသွားတယ်..
မကြီးကလည်း သူများ ဖီလင်ယူနေတာကို ဘယ့်နှယ့် ပိတ်မယ်တကဲကဲလုပ်နေတာတုန်း ;P
ဘူမိအတွေ့အကြုံလေးတွေ အားကျလိုက်တာ ဖတ်လို့လည်းအရမ်းကောင်းတယ်
အန်တီချိုသင်းရေ.. စာမဖတ်ရတာကြာပြီ။ ပြန်ရေးမယ့်ရေးတော့လည်း ဗဟုသုတလည်းရ၊ အတွေ့အကြုံသစ်လေးတွေလည်းရလို့။ ခံစားမှုနဲ့ ရေးတဲ့စာတိုင်းက သူ့ဟာနဲ့သူ ကောင်းနေတာချည်းပါပဲ။
အမေတွေဆိုတာ အတွေ့အကြုံတွေကို ကိုယ်တွေထက် ဦးအောင်ရခဲ့လို့ .. အမေ့ ဆီက ရလိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ် လေးက ပိုလို့ ထိမိ နေတယ်နော် အမ ... တောင်များကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း တဲ့ ...
ချိုသင်းရေ ရွှေအမြုတေမှာတုန်းကလည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဒီ ဘလော့ဂ်မှာပဲ တခါတင်သေး တင်ထင်တယ်။
ပြန်ဖတ်တော့လည်း ကောင်းပါတယ်။ လူတွေကလည်း သိတဲ့ သူတွေချည်း ဖြစ်နေတာကိုး။ ကိုဝင်းအောင်၊ အောင်ကြည်ထွန်း၊ စဝတ၊ နိုင်နိုင်။ ကိုနေလင်းဆိုတဲ့ တယောက်သာ မသိတာ (မသိဘူး မဟုတ်လား ကိုနေလင်း :P)။
ဒီထဲမှာ မပါတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း မှတ်မိသေးတယ်။ ကိုနေလင်းပြောတဲ့ ဘဲဥလေးကို တောင်အောက်ဆင်းသွားတဲ့ ဇာတ်လမ်း။ ချိုသင်း စဝတကို တက်ဖိတဲ့ ဇာတ်လမ်း (မတွေးရဲစရာ :O)။
ကျောင်းတုန်းက အကြောင်းတွေ ရေးပါဦး။ ချိုသင်းရေးရင် ရီရင်း မောရင်း လွမ်းရမှာ။
ဘူမိဗေဒဘ၀ကိုပြန်တော့လွမ်းမိပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ထဲမှာ ငှက်ဖျားဒဏ်အလူးအလဲခံခဲ့ရတာကိုတော့တော်တော်
မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်သွားတယ်... အဲလို အချိန်တွေရှိခဲ့တာ ပျော်စရာပါ။
ကြုံတွေ့ရဦးမယ့် တောင်တွေအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။
တနသာင်္ရီရိုးမကတောင်တွေပေါ်မှာ ကိုးညတိတိခရီးသွားခဲ့ရဖူးပါတယ် လမ်းမရှိဘူး..နက်ရှိုင်းပြီးမြင့်မားလှတယ်ဗျာ...ခုချိန်သာဆို၁၀မိနစ်တောင်ခံနိူင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး
မချိုသင်း လွမ်းနေတာ ကြာပေါ့။ အစ်မတို့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူဘ၀က တကယ့်ကို ပျော်စရာပဲ။
ကိုတိုး ဖိုးချိုသီချင်းတွေ ရောပြီး ဆိုသွားပါတယ်...(ခေါင်းခါရင်း မျက်စိမှိတ်ရင်း)
အစ်မ တောင်တက်တဲ့ပုံကို စိတ်ကူးနဲ့မြင်ယောင်ပြီး ပြုံးစိစိ ဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာ...။
အရေးအသားတိုင်း စာဖတ်သူ ကို အမြဲ စိတ်ပျော်ရွှင် ကြည်နှုးစေပါတယ် ။ မင်္ဂလာပါ အစ်မ MCT.
ဒီတောင်ကို မောင်ကြီး မကျော်နိုင်ပေမယ့် အမ မိုးချိုသင်းတော့ ကျော်နိုင်မှာပါ။ အမေ ရဲ့ အားမာန်၊ ဇွဲ သတ္တိတွေနဲ့ပေါ့။
ခေါင်းကိုတွင်တွင် ရမ်းသွားတယ်...း)
မြန်မာပြည်တွင်းက တူတရွင်း ပေါက်စနလေးတွေထက်စာရင်
အဆများစွာ ပိုလို့ အစွမ်းထက်ပါတယ်...
အားတင်းထား... အားခဲထား... အားမွေးထား...
အစ်မရေ စာတွေပြန်ရေးပါ .. အစပျိုးပြီး ရပ်မနေပါနဲ့နော် အဟီး
မိုးအလင်း မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ခေါင်းတခါခါ..အသံပြဲကြီးနဲ့
Ph ထိုးလိုက်မယ် later
Oh.. We really hadaGreat Time!!
Thxs. for everything..
you remembered "everything's ok" ? right?:)))
A million wishes of luck and success with your new endeavour!
ငယ်လက်ရာလေးလဲ အပြစ်အနာကင်းပါတယ် ချိုသင်းရယ်…
ခုချိန်ပြန်ဖန်တီးရင် ဒီလောက် လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပျော်ဝင်ချင်မှ ပျော်ဝင်မှာလေ… တောင်တွေက အများကြီးတက်ဖူးခဲ့ပြီမိုလား…
အဲလိုဖီးလ်ဆင်းရတာမျိုးလေးတွေ သိပ်သဘောကျခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ယူတဲ့မေဂျာက စာသင်ခန်းထဲ အချိန်ကုန်တာများခဲ့တာ… ဒါပေမယ့် ပျော်ပါတယ်လေ… ကျောင်းသားဘ၀ဆို စာသင်ခန်းထဲနေရတာကိုက ဘာမှမဟုတ်ပဲပျော်နေမိတာမိုလား…
ချိုသင်းတို့ လို တခရီးထဲသွားပြီး ပညာအတူရှာကြရသူတွေရဲ့ အမှတ်တရတွေက အတော်များမှာလို့မှန်းကြည့်မိတယ်…
ချိုသင်းရေ… အမလဲ ဖီးလ်ကွေးရင် ခင်မောင်တိုး…စိုင်းထီးဆိုင်…ထူးအိမ်သင်…မွန်းအောင်…ဖိုးချို… ခိုင်ထူးတို့ နဲ့အလွမ်းဖြေတတ်တယ်… ဒီနေရာမှာတော့ အိမ်ကလူနဲ့ အဖော်စပ်လို့ ရတယ်လေ…
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ဖူးခဲ့တာလေး ပြန်မှတ်မိလာပါတယ်...။
အခုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ ချစ်သောသူနဲ့ အတူတူ တက်နေရတဲ့ တောင်တွေမို့ ချိုသင်း အပြုံးမပျက် တက်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
မောတော့ မောတာပေါ့... ဒါပေမယ့် မမောဘူးပေါ့...
အမချိုသင်းရေ ပျောက်နေလို့ မျှော်နေတာ... လည်ပင်းတောင် အတော် ရှည်နေပြီ။ လူကဲခတ်တဲ့ နေရာမှာတော့ ပြိုင်ဖက်ကင်းလို့ ပြောရမလားပဲ :) ဖတ်ပြီး မျက်စိထဲပါ မြင်ယောင်ပြီး ရီနေရတယ်။ ၀တ္ထုတိုကလည်း ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် အမတို့ ကျောင်းတက်ရတဲ့ အချိန်တွေက ပျော်စရာကြီးနော်။ ဆက်မျှော်နေဦးမယ်...
''ပျားရည်အိမ်"ကနေ စဖတ်ခဲ့တာ..။ ဆရာမရဲ့ ၀တ္ထုတွေ အားလုံးနီးပါး ဖတ်ဖူး၊ ကြိုက်ဖူးနေခဲ့တာ။ အစ်မရဲ့ လက်ရာတွေ မတွေ့ရတာ ကြာလို့ မျှော်နေ၊ လွမ်းနေပါတယ် ခင်ဗျ...။